I-Chocolate Museum ikhona emazweni amaningana | Izindaba Zokuhamba
Chocolate Museum, yakudala emazweni amaningana
Ngubani ongakhangwa ngumqondo wokusondela ku- Umnyuziyamu Washokolethi? Yize singenayo intshisekelo ngomlando walokhu kudla, kungenzeka ukuthi ukuphuza amaswidi athile kuyakhanga kithi. Kungakho singathola emhlabeni jikelele izindawo eziningana ezaziwa ngokuthi yiChocolate Museum, ngoba ayikho eyodwa kuphela, kodwa eziningana ezidume kakhulu futhi ezithakazelisayo.
ESpain sinezinto ezimbalwa ze- iminyuziyamu enikezelwe kushokoledi omnandiKepha iqiniso ukuthi kukhona abanye kwamanye amazwe asebephenduke izindawo ezaziwa kakhulu, njengeCologne. Ngakho-ke sizohlaziya eminye yale minyuziyamu, uma kwenzeka uhambela ezinye zalezi zindawo futhi ufuna ukuvakashela kuyo.
1 ICologne Chocolate Museum
2 I-Xocolata Museum yaseBarcelona
3 I-Astorga Chocolate Museum
4 IGourmet Chocolate Museum eParis
5 I-Choco-Indaba eBruges
6 I-Phillip Island Chocolate Factory e-Australia
ICologne Chocolate Museum
Yaziwa nangokuthi Imhoff-Stollwerck Museum, lesi sikhala siseduze ne-cathedral enhle yedolobha, kumele ubone, ngakho-ke cishe akunakwenzeka ukuthi ungami emnyuziyamu. Lesi sigcinamagugu savulwa ngo-93 futhi sisesakhiweni samanje esiseduze neRhine.Imyuziyamu izinikele ngokuphelele emhlabeni kashokolethi futhi ngaphakathi ungawazi lo mkhiqizo ngokujulile. Kusukela ekutshalweni kukabhontshisi we-cocoa kuya ekwandisweni noma umlando wawo ngokuhamba kwesikhathi. Ezitezi ezimbili ungabona ukuthi zakha kanjani kusuka koshokholethi kuya kumanani kashokoledi noma amabha amnandi agcwele ukunambitheka.
I-Xocolata Museum yaseBarcelona
Le mnyuziyamu isendaweni yedolobha iBarcelona, ​​futhi ingenye yezimbalwa ezweni lethu ezinikezelwe kushokoledi. Kuyinto imnyuziyamu yangasese futhi itholakala ku- Isakhiwo somlando weSant Agustí Convent yakudala. Ngaphakathi ungabona imisebenzi eyiqiniso yobuciko nezibalo ezenziwe ngoshokoledi, kanye nohambo ngomlando woshokoledi. Elinye lamaphuzu amnandi alo mnyuziyamu ukuthi amathikithi owathenga ukungena kuwo ayadliwa futhi enziwa ngoshokoledi. Kulesi sigcinamagugu kungenzeka futhi ubhalisele amakilasi okupheka amnandi neminye imisebenzi.
I-Astorga Chocolate Museum
ESpain sinenye imnyuziyamu enikelwe ushokoledi ocebile e-Astorga, ngesitayela somlando esithe xaxa. Leli dolobha linamasiko kashokholethi amahle yingakho bethathe isinqumo sokwakha le Museum ngo-94. Ngaphakathi emnyuziyamu kukhona amakamelo amane futhi kuwo ungabona izinqubo namathuluzi noma imishini esetshenziselwa ukudala ushokoledi oyigugu. Kukhona iqoqo lemibhalo elihlanganiswe lapho i-protagonist ingushokoledi. Ngaphezu kwalokho, uma kukhulunywa kakhulu ngalo mkhiqizo kushaya isifiso sethu sokudla, sinesitolo lapho kungenzeka khona ukuthenga zonke izinhlobo zikashokoledi.
IGourmet Chocolate Museum eParis
I-Choco-Story chocolate Museum itholakala eParis, kwi-boulevard Bonne Nouvelle. Enye imnyuziyamu enkulu engaba yi ukuma okumnandi kunoma yikuphi ukuvakashela edolobheni. Ngaphakathi emnyuziyamu ungafunda ngokujula umlando wecocoa, izindlela ezahlukahlukene zokukhiqiza nokunambitha ushokoledi. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuyimyuziyamu eqondiswe emndenini wonke, okufakwe kuyo izithombe ezithile ukujabulisa izingane. Kungenzeka ukuthi ubambe iqhaza kwi-workshop yokukhiqiza ushokoledi ukwenza imikhiqizo yethu njengomndeni.
Edolobheni laseBelgium iBruges sithola omunye umnyuziyamu othokozisayo lapho besitshela konke kusukela ekuqaleni, ukuqala ngokukhiqizwa kukashokoledi ngamaMaya kuze kube namuhla. Lokhu kungenye imnyuziyamu egxile emndenini, njengoba izingane zingakuthokozela ukufunda ngendlela yokusesha eyenzelwe bona ngaphakathi komnyuziyamu. Njengoba kungenakuba ngenye indlela, umnyuziyamu ukhiqiza ushokoledi izivakashi ezingazinambitha. Umnyuziyamu utholakala eWijnzakstraat futhi uvulwa nsuku zonke kusuka ngo-10 ekuseni kuya ku-17 ntambama.
I-Phillip Island Chocolate Factory e-Australia
Uma ubheka iwebhusayithi yale femu kashokolethi, incwadi kaCharlie nefektri kashokolethi nakanjani izofika engqondweni. Ngaphakathi kwemboni kungenzeka kutholakale eziningi izikhala nemisebenzi emangazayo. Kufanele ume ukuze ubone impophoma enkulu kunazo zonke yoshokholethi emhlabeni, jabulela ukushayela isitimela samathoyizi esincane edolobheni elinoshokoledi noma ukhuphuke isisindo esikhulu sokuhambisa ithani likashokoledi ongakolunye uhlangothi. Le ndawo imnandi ezinganeni nakubantu abadala ngokufanayo, enemibala eminingi nezinto eziningi ezimnandi zokwenza. Kukhona nendawo yokudlela yokunambitha umkhiqizo wezinkanyezi, ushokoledi. Ezinye izinto ezingenziwa ukubona isithombe sikaDavid sikaMichelangelo ngoshokoledi, ukudlala ngomshini omkhulu wokwenza ushokoledi, ukuya emihlanganweni yokufundisa ushokoledi ukuze ubone ukuthi izibiliboco zenziwa kanjani ngalo mkhiqizo, udlale emishini, ubone i-animatronics noma thenga ezitolo. Imboni enkulu yonke eseNewhaven, e-Australia.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Chocolate Museum, yakudala emazweni amaningana
ICopper Canyon, imihosha emangazayo eMexico
Insimu Yamazwi, okumele ubonwe eTokyo